Global Voices teny Malagasy » Podcast Global Voices: Ny Lafy Tsara Sy Ny Lafy Ratsin’ny Fanentanana Antserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Avrily 2012 3:20 GMT 1	 · Mpanoratra Jamillah Knowles Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Afrika Mainty, Amerika Avaratra, Eoropa Andrefana, Etazonia, Oganda, Syria, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Global Voices Podcast
Tongasoa eto amin'ny podcast vaovao an'ny Global Voices. Amin'ity andiany ity, miaraka amintsika eto ny mpiara-manentana amiko Yazan Badran , mpanoratra ao amin'ny Global Voices Syrie monina ao Japana. Ny lohahevitra amin'ity volana ity : Ny lafy tsara sy ny lafy ratsin'ny fanentanana ankapobe amin'ny valantserasera [Amin'ny teny anglisy ny rohy sy ny feo].
Tamin'ny volana lasa, hitanay fa niadian-kevitra be indrindra tao amin'ny Twitter, Facebook ary ny tambazotra sosialy ny iray tamin'ireo fanentanana tamin'ny valantserasera . Nanjary nifandray tamin'ny lahatsary misy ny asa ratsy nataon'ilay mpamono olona ogandey Kony Joseph ny fanentanana “Kony 2012 , izay hitan'ny olona an-tapitrasany. Fomba tsara nanasongadinana ny olana ve izany? Nandrakitra ireto fanehoan-kevitra maromaro  ireto izahay.
Mpanao gazety ogandey i Rosebell Kagumire , no sady mpamahana bolongana ary mpanoratra ao amin'ny Global Voices online, monina ao Kampala izy. Tonian-dahatsoratra ao amin'ny Channel16  (Fantsona 16) izy, vohikalam-baovaon'ny mpamahana bolongana hitantarana momba ny ady sy ny vaovao mikasika ny maha-olona. 
Raha nahita ny lahatsary Kony 2012 i Rosebell, dia nandrakitra lahatsary  somary mahavariana tanteraka tao amin'ny YouTube izay nahitana mpitsidika maherin'ny 500 000 [mpitsidika maherin'ny 590 000 tamin'ny 10 aprily]. Mizara ny heviny amintsika momba ny fihetseha-pony voalohany izy.
Tsy nankato  ny fanentanana momba ny Kony ireo olo-pirenena tao amin'ny firenena maro ao Afrika.
Tsy zava-baovao ny fikarakarana fanentanana antserasera. Mety ho fomba tsara hahazoana hevitra avy amina loharano maroloha izany, sy hisarihana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ary hanangonam-bola ihany koa. Nanamafy i Yazan fa nahitam-pahombiazana tanteraka ny hetsi-panoherana (antserasera) ny volavolan-dalàna SOPA  tao Etazonia. Nanome vaovao izany hetsi-panoherana izany ary nampahafantatra ny olo-pirenena ny amin'ny loza momba ny sivana atao amin'ny aterineto.
Nametraka fanontaniana tamin'ny mpikambana ao amin'ny Global Voices izahay mba handraisana ny hevitr'izy ireo momba ny fanentanana antserasera. Misaotra an'i Asteris Masouras  ao Gresy, Lova Rakotomalala  ao Madagasikara, Mohamed Ragab  ao Ejypta, Rana Khattab  avy any Palestina (monina ao Arabia saodita) ary i Mohammed Adel  avy ao Yémen tamin'ny nanehoany ny fijeriny.
Fanentanana te-hisarika ny sain'ny olona momba ny fihetsiketsehana sy ny herisetra miseho ao amin'ny firenena ny Unite for Syria (Miray ho an'i Syrie) ka hanentanana ireo mpiserasera manerana izao tontolo izao mba handrakitra ny sarin'izy ireo ho fanehoana ny fanohanana ny Syriana. Tarek Amr , injeniera sy mpanoratra ao amin'ny Global Voices ao Kairo, Éjipta, nilaza betsaka momba izany nandritra ity fanentanana ity izay tafiditra ihany koa tao anatin'ny vaovao malaza manerantany.
Mifanandrify amin'ny fanentanana iraisana, miara-miasa akaiky amin'ny fanentanana antserasera miaraka amin'ny fikambanana tsy mitady tombombarotra sy ny fikambanan'ny mpikatroka ny orinasa sasany eo amin'ny sehatry ny serasera mivelatra . Boyd Neil  no tale sy tompon'andraikitra nasionaly amin'ny fampiharana, talen'ny valantserasera sy ny serasera nomerika ao amin'ny orinasa Hill & Knowlton Stratégies ao Kanada. Nilaza izy fa zavakanto tsy mora ny mifehy ny tontolon'ny aterineto.
Nandritra ny podcast, afaka mihaino mozika maro mahafinaritra ianao izay nahazoan-dalana tamin'ny alalan'ny Creative Commons. Misaotra an'i Mark Cotton  tamin'ny famoronana nataony ary misaotra ihany koa ireo feo mahafinaritra sy ireo olona nanampy tamin'ny fanatontosana miaraka ity andiana podcast ity. Ny podcast Global Voices : maneho hevitra izao tontolo izao, mino izahay fa mihaino ianao !
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/12/31939/
 fanentanana “Kony 2012: https://globalvoicesonline.org/specialcoverage/joseph-kony-2012-uganda/
 Rosebell Kagumire: https://globalvoicesonline.org/author/rosebell-kagumire/
 nandrakitra lahatsary: http://www.youtube.com/watch?v=KLVY5jBnD-E&feature=player_embedded
 Tsy nankato: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/03/14/101887/
 ny hetsi-panoherana (antserasera) ny volavolan-dalàna SOPA: https://fr.globalvoicesonline.org/2012/01/18/94782/
 Mohamed Ragab: https://ar.globalvoicesonline.org/author/mohamed-ragab/
 Rana Khattab: https://ar.globalvoicesonline.org/author/rana-khattab/
 Mohammed Adel: https://ar.globalvoicesonline.org/author/mohammed-alamer/
 Unite for Syria : https://fr.globalvoicesonline.org/2012/03/14/101768/
 Boyd Neil: http://www.boydneil.com/about-me/